Fikambanana mpangalatra tao an-tampon-tanànan’i Ihosy ireto tratra ireto. Ny polisy miasa ao
amin’ny CSP Ihosy no nahazo azy ireo ny 30 jolay 2019 lasa teo, resaka halatra sy vaky trano. Tsikaritra tato ho ato tany an-toerana fa niakatra ny tahan’ny halatra bisikileta, ny vaky trano ka ny mpivarotra enta-madinika no tena lasibatra. Nametraka paik’ady noho izany ny polisy miasa any an-toerana tamin’ny fiaraha-miasa amin’ireo andrimasom-pokonolona mba hamongorana izany. Vokany, taorian’ny angom-baovao marim-pototra, ny 30 jolay teo dia enina mianadahy no sarona nanao ny asa ratsiny. Samy manana ny anjara asany izy ireo, ny sasany mpamaky trano, ny hafa mandray sy mivarotra ny entana halatra. Mbola tratra tao amin’ny trano fonenan’izy ireo ny bisikileta halatra sy ireo kojakoja fampiasa andavanandro. Fantatra ihany koa fa mampiasa fanafody gasy ireto jiolahy ireto eo am-panatanterahana ny asany.